သင့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို Blockchain က ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိစေမလဲ။ - Vanguard
For Blog Features Image copy
Home » သင့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို Blockchain က ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိစေမလဲ။
သင့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို Blockchain က ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိစေမလဲ။
Posted by Vanguard on February 14, 2018 .
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို နက်နဲသိမ်မွေ့စွာ သက်ရောက်လာမယ့် နည်းပညာတော်လှန်ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုရှိနေပြီး၊ အဲ့ဒီအရာဟာ လူမဲ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ကား မဟုတ်သလို augmented reality (AR) နည်းပညာတွေ ဒါမှမဟုတ် (3D printing) လို့ခေါ်တဲ့ သုံးဖက်မြင် ပုံနိုပ်ခြင်းတွေလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ဒီ နည်းပညာကို ခေါ်ဆိုတာကတော့ Blockchain ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ မကြာမှီဖြစ်လာမယ့် Computer Engineering မျိုးဆက်တွေမှာတော့ အသိမ်မွေ့ဆုံး ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။ Blockchain ဟာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ကောင်းခြင်း၊ တာဝန်ခံပေးခြင်းနဲ့ Electronic Transaction အမျိုးမျိုးတို့အတွက် ရှင်းလင်းစွာ နားလည် သဘောပေါက်စေခြင်း စတာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
နောင်အနာဂတ်မှာ တွေ့မြင်လာရမယ့် အင်တာနက်။
Blockchain ဆိုတာဟာ များစွာသော Transaction တွေကို Block အနေနဲ့ အစဉ်မပြတ် ထိန်းသိမ်းပေးထားတဲ့ Electronic Ledger တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါမှတ်တမ်း Block တွေကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးပေးတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Ledger ဟာ Transaction တွေကို ကြားကနေ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် စနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုစရာမလိုပဲ ဘယ်သူ့ကိုမဆို လွယ်ကူပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး (၃) ချက် ကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အမှီအခိုကင်းခြင်း – ငွေလွှဲဌာနတွေ၊ ဘဏ်တွေ၊ အကြွေးဝယ်ကဒ် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစုကြီးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့ နေ့တွေကို နှုတ်ဆက်ခဲ့လိုက်ပါ ။ Blockchian နည်းပညာနဲ့ ဆိုရင် လူတိုင်းဟာ တူညီတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေကို သာတူညီမျှရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ် ။
နေရာဒေသ အခက်အခဲ ကင်းခြင်း – Silicon Vally ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာတင်မဟုတ်ပဲ အာဖရိကရဲ့ အစွန်အဖျား မှာပဲ ဖြစ်နေပါစေ လူတိုင်းဟာ မိုဘိုင်း(လ်)ဖုန်းတွေ အသုံးပြုသလိုမျိုး အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကနေတစ်ဆင့် အရင် တုန်းက အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေအနေနဲ့သာ အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရယူသုံးစွဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖျက်စီးမရနိုင်တဲ့ မှတ်တမ်းဖြစ်ခြင်း – State-of-the-art Cryptography ကို အသုံးပြုထားခြင်းအားဖြင့် မှတ်တမ်းတွေဟာ မပျောက်ပျက်ခြင်း၊ လုံခြုံ စိတ်ချရမှုရှိတဲ့အပြင် အသုံးပြုသူများရဲ့ ကွန်ယက် တည်နေရများကိုလည်း အတည်ပြုစစ်ဆေးမှု တွေ ရှိမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
Blockchain ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ။
Blockchain ဟာ ကွန်ယက်တစ်ခုအတွင်းက အမြဲတမ်းတွက်ချက်မှုရှိနေတဲ့ Transaction တွေအားလုံးရဲ့ Public Ledger တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Transaction Block တွေဟာ နေ့စွဲ အစီအစဉ်အတိုင်း ထည့်သွင်းထားတာမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ကွန်ယက်ကို ချိတ်ဆက်လာတဲ့ ကွန်ပျူတာတိုင်းရဲ့ Transaction တွေကို အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ် ။ ထို့နောက် အဆိုပါ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့၊ အမှီအခိုကင်းတဲ့ ကွန်ယက်တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ပါတယ်။
Block တစ်ခုဟာ Blockchain ရဲ့ လက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Transaction အချို့ ဒါမှမဟုတ် လတ်တစ်လော ရှိသမျှ Transaction တွေ အားလုံးကို မှတ်သားထားပြီး အဆိုပါ Transaction တွေ အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Blockchain သို့မဟုတ် တည်မြဲတဲ့ အချက်အလက်သိုမှီးမှု စနစ်ထဲကို ပို့လွှတ်ပါတယ် ။ Block တိုင်းကို အချိန်၊ နေ့စွဲနဲ့တကွ အစီအရီ သိမ်းဆည်းထားပြီး Hack လို့ မရနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ် ။
Blockchain ဟာ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်။
Blockchain တစ်ခုအနေနဲ့ လူသိအများဆုံး Application တစ်ခုကတော့ လတ်တစ်လောမှာ တော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုအဖြစ် လူသိများတဲ့ Bitcoin ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Bitcoin ဟာ ၄င်းရဲ့ အသုံးပြုသူ ကွန်ယက်ပေါ်မှာသာ မှီခို ထားပြီး ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးပြောင်းလဲဖို့မလွယ်တဲ့ ငွေမာတွေလိုမျိုး အလွယ်တ ကူ အတုပြုလုပ်လို့ မရနိုင်တဲ့အပြင် ခြေရာကောက်လို့ မရနိုင်တာမျိုးတွေလဲ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ Bitcoin ဟာ Digital Economy အတွက် တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး Transaction တိုင်းဟာ အသေးစိတ်ကျတဲ့ အချက်အလက် သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ မှတ်သားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် Bitcoin ဆိုတာဟာ အစပဲရှိပါသေးတယ်။ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ Ledger နည်းပညာတွေအနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလာမှာပါလဲ ဆိုတာ ကတော့…
၁. သန်းပေါင်းများစွာ သော လူတွေကို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ ပါ၀င်လာစေနိုင်ခြင်း။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရ (၂) သန်းမကသော လူတွေဟာ ယနေ့အချိန်ထိ Basic Transaction တွေကို ထိတွေ့သုံးစွဲနိုင်စွမ်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ယခင် အစဉ်အလာဟောင်း ကျင့်သုံးတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ အသေးစိတ်ကိစ္စရပ်တွေဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ လူတိုင်းအပြည့်အဝ ပါ၀င်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကို ရွှေပြည်တော်ရယ် မျှော်တိုင်းဝေးစေပါတယ်။ Blockchain အနေနဲ့ကတော့ ဒီလူတွေကို သင့်တော်သလို ပါ၀င်လာစေနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ၀င်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကို လွယ်ကူလုံခြံုမှုရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ Transaction လေး တစ်ကြောင်း အဆင်ပြေချောမွေ့သွားဖို့ အတွက်ကို အဖွဲ့အစည်း တစ်ဒါဇင်လောက်ဟာ ရာနဲ့ချီအောင် အဆက်အသွယ်တွေလုပ်ကြရပါတယ်။ ဒါဟာ ပြောင်းလဲ သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်ပါပဲ။
အချင်းချင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မှု ပုံစံသစ်ကို ဘဏ်တွေ၊ အကြွေးဝယ်ကဒ် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အစိုးရလိုမျိုး ကြားခံ ဆက် သွယ်ပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်းလိုမျိုး နေရာတွေမှာ အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းက ဘဏ် စနစ်ကို အသုံးမပြုနိုင်တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော လူတွေဟာ အသစ်ဖြစ်လာမယ့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ ပါ၀င်လက်တွဲလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
၂. လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ် လျှော့ချနိုင်ခြင်း။
Blockchain နည်းပညာဟာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေ၊ စောင့်စည်းလိုက်နာစရာတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေစတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ခဲတဲ့ လည်ပတ်မှုတွေကို ချောမွေ့လွယ်ကူစေပြီး အလိုအလျောက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးလာနိုင်မယ့် သိမ်မွေ့တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား စက်ပစ္စည်း အချင်း ချင်း ဆက်သွယ်အသုံးပြုမှုဟာ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး နှေးကွေးတဲ့အပြင် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လူ့အရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် IT Systems တွေနဲ့ Solution တွေကို ပေါင်းကူး တံတားသဖွယ် တည်ဆောက်ရတာဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကုန်ကျခံဖို့ မထိုက်တန်လှပါဘူး ။ Blockchain အနေ နဲ့ကတော့ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာသုံး အချက်အလက် သိုမှီးမှုစနစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စနစ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကြား တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လွယ်ကူသက်သာမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တစ်လောရရှိထားတဲ့ စစ်တမ်းများအရ Blockchain နည်းပညာဟာ ဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွက် တစ်နှစ်ကို $8 Billion နဲ့ $12 Billion ကြား ပိုမို သက်သာလာ ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
၃. သဘောတူညီမှု စာချုပ်စာတန်းတွေကို ပိုမို မြန်ဆန် ချောမွေ့ လွယ်ကူ လာစေခြင်း။
ဉာဏ်ရည်မြင့်စာချုပ်ဆိုတာဟာ အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ စာချုပ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းအနှစ်သာရကို ဖြစ်မြောက်အောင် ဖန်တီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ Computar Protocol တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဉာဏ်ရည်မြင့် စာချုပ်တွေဟာ စာချုပ် ပါ အကြောင်းအချက် သဘောတူညီမှုတွေကို ရှေ့နေတွေ၊ အပေါင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကြားပွဲစားလိုမျိုး ကြားခံတွေ၊ အချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပါ ပိုပြီးမြင့်တက်စေတဲ့အရာတွေ မပါ၀င်စေပဲ တိုက်ရိုက်အခြေပြု ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။
ဉာဏ်ရည်မြင့်စာချုပ်တွေဟာ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေကို မှတ်တမ်းဖမ်းယူပေးနိုင်တဲ့အပြင် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အမှားတွေကိုလဲ လျှော့ချပေးပါတယ်။ အဆုံးမရှိတဲ့ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေ၊ အချက်အလက် အရင်း အမြစ်တွေနဲ့ အစီရင်ခံစာ ယန္တယားတွေကြောင့် အလုပ်တွေပုံနေတတ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လုပ်ငန်းကြီးတွေ အနေနဲ့ ငွေပေးချေခြင်းတွေ၊ အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ လျှင်လျှင်မြန်မြန်တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
Blockchain ရဲ့ အနာဂတ်။
Blockchain ဟာ ယင်းရဲ့ အစောပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာတင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သံသယကို ရိုက်ချိုးခဲ့ပါပြီ။ နောင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှာ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် Internet အခြေအနေနဲ့ နောင် ဆယ်စုနှစ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Cloud နည်းပညာတွေ ကို ကောင်းကောင်းကြီးယှဉ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ရှိနေမှာပါ။ လတ်တစ်လော အနေနဲ့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ အနေအထား လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် Blockchain ဟာ ခဏလေးအတွင်း ပျောက်ပျက်သွားမယ့်အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းဦး ပေါက်တုန်းက IBM အနေနဲ့ Blockchain နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ $ 200 Billion ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက် လူပေါင်း ၁၀၀၀ လောက်ကိုလဲ အလုပ်ခန့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားပါတယ်။
ဒါတွေရဲ့ အကျိုးဆက်၊ အကျိုးရလာဒ်ကတော့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာလူတွေ ပိုမိုပါ၀င်လာနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းပိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်တွေဟာ လျော့ကျလာခြင်း၊ သဘောတူညီမှု စာချုပ်တွေဟာလဲ ပိုပြီး လွယ်ကူချောမွေ့ မြန်ဆန်လာခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာ Blockchain က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အားသာချက်တွေပဲဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Stay tune to this page!
#SAP #ERP #VANGUARD_MYANMAR #SAP_MYANMAR #LOCAL_PARTNER